संविधान जारी भएर स्थिर सरकार बनेसँगै लगानीको वातावरण तयार भएको हो । बन्द हडताल अन्त्य भएको छ । कलकारखानामा मजदूरका उठ्ने गरेका समस्या धेरै हदसम्म हल भएको छ ।
चितवन-नयाँ संविधान जारी भएसँगै लगानीको लहर चलेको छ । पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका लगानीकर्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागेका छन् । उद्योगीले क्षमता विस्तार गरेका छन् । विदेशमा रहेका विदेशी लगानीकर्तासहित नेपाल फर्किएर लगानी गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।
२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएसँगै लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । संविधान जारी भएर स्थिर सरकार बनेसँगै लगानीको वातावरण तयार भएको हो । बन्द हडताल अन्त्य भएको छ । कलकारखानामा मजदूरका उठ्ने गरेका समस्या धेरै हदसम्म हल भएको छ । चौतर्फी सकारात्मक वातावरण बनेसँगै लगानीको वातावरण सिर्जना भएको हो ।
कर, भन्सारजस्ता निकायमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही समस्या रहेका भए पनि क्रमशः समाधान हुँदै जानेमा लगानीकर्ता विश्वस्त छन् । उद्योग परिसंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका यहाँका उद्योगी कृष्ण अधिकारी देशैभर लगानीको वातावरण बनेको बताउँछन् । अस्थिरता विकासको बाधक रहेको भन्दै उनले अहिले स्वदेशी र विदेशी लगानी निकै थपिएको बताए । पूर्वाधार विकास, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको बढेको अधिकारीको भनाइ छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं. ३ का उपाध्यक्षसमेत रहेका यहाँका उद्योगी राजन गौतम उद्योगधन्दा खुल्दै गएको तर सरकारले उद्योगलाई भन्दा व्यापारलाई प्रश्रय दिँदा समस्या भएको बताउँछन् । पूँजी भएका र नभएर पनि बैंकले पत्याएका सबैको चाहना अहिले लगानी गर्ने रहेको भन्दै उनले अरु थप वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य रहेका पोल्ट्री व्यवसायी डा. तिलचन्द्र भट्टराई बन्द हड्ताल नहुनु, स्थायी सरकार बन्नु र ऊर्जाको समस्या हटेकै कारण लगानीको वातावरण बनेको बताउँछन् । नयाँ पुस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागेको भन्दै उनले सरकारले हाल देखिएका साना समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । पोल्ट्री क्षेत्रमा देशभर नै लगानी बढ्ने क्रम जारी रहेको उनले बताए । व्यवसाय गर्दै आएकाले विस्तार गरेका र नयाँ लगानीकर्ता थपिएको भट्टराई बताउँछन् ।
उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष सहनलाल प्रधान संविधान जारी भएर कार्यान्वयनको चरणमा आउँदै गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्र र व्यवसायमा लगानी गर्नेहरू थपिएको बताउँछन् । स्थिर सरकार बनेसँगै काम गर्ने वातावरण सकारात्मक हुँदै गएको प्रधानको भनाइ छ । जिल्लामा होटल, पोल्ट्री, व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योग थपिँदै गएका छन् ।
उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष भेषराज दुवाडी नयाँ संविधान बनेसँगै उत्साहित बनेका उद्योगी अहिलेको ऐन, कानुनका कारण निराश बनेको बताउँछन् । तयारी सामानलाई भन्दा कच्चा पदार्थलाई बढी भन्सार लिइँदा उद्योगमा गम्भीर असर परेको उनले बताए ।
प्रशासनिक काममा ब्यहोर्नुपर्ने झन्झट र नमिलेका कर एवं भन्सारका दर सुधार भएमा लगानीकर्ता थप उत्साहित बन्ने दुवाडी बताउँछन् । सरकारले व्यापारलाई प्रश्रय दिएर उत्पादनमूलक उद्योगलाई बेवास्ता गरेजस्तो देखिएको भन्दै उनले तत्काल सुधारका लागि आग्रह गरे । जसले लगानीको वातावरण निरन्तर बढाउने उनी बताउँछन् ।
क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक भट्टराई पछिल्लो समय नयाँ होटल खोल्ने र पुराना विस्तार गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको बताउँछन् । जग्गा किनेर, भाडामा लिएर वा होटलनै भाडामा लिएर सञ्चालन गर्ने पनि थपिएको भट्टराईको भनाइ छ । उनले भने, “सन् २०२० सम्ममा नेपालमा पर्यटक अत्याधिक बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । जसका कारण होटल खोल्ने क्रम बढेको हो ।” नयाँ संविधानसँगै बनेको दुई तिहाइको सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नीतिगतरुपमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने लगानीकर्ता थप उत्साहित हुने देखिन्छ ।